दलाल संसदीय व्यवस्था लादेर सत्ता पुनर्संरचना भन्नु झूटो र जाली कुरा हो - विप्लव | Janakhabar
दलाल संसदीय व्यवस्था लादेर सत्ता पुनर्संरचना भन्नु झूटो र जाली कुरा हो – विप्लव
देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । अर्को्तिर सरकारको स्थायित्वको प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ?
सरकारले गर्न लागेको राज्य पुनर्संरचनाको बहसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले जारी गरेको संविधान लागू हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
प्रचण्ड र मोदीका बीचमा भएको २५ बुँदे सहमति राष्ट्रघाती भन्नुभयो । तर त्यसका विरुद्ध कार्यक्रम भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
आठौं महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसको आवश्यकता किन प¥यो ?
हो, हामी आठौँ महाधिवेशन गर्दैछौँ । यो अनपेक्षित त होइन तर ठूलो निर्णयचाहिँ हो । हामीले महाधिवेशनलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक सन्दर्भबाट हे-यौँ भने यसलाई सङ्घर्षकै उच्च रूप पनि मान्न सकिन्छ । हामीले भनेका पनि छौँ– महाधिवेशनलाई नेपाली क्रान्तिको फैसला गर्ने थलोका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । सायद तपाईंहरूलाई थाहा छ, वर्गसङ्घर्षलाई क्रमभङ्ग गर्दा पहिले हाम्रा वैचारिक र राजनीतिक संश्लेषणहरूमा उच्चता हासिल गर्नुपर्छ । नेपालमा कयौँ महाधिवेशन र सम्मेलनहरू क्रान्तिका लागि निर्णायक नै बनेका छन् । यसपटक त्यो हुनेछ । हामीले विकसित विश्व राजनीतिक घटनाहरू, नेपाली राजनीतिक वस्तुस्थिति र ती विषयमा नयाँ संश्लेषणको महत्वलाई पकडेका छौँ । हामी एउटा उचाइबाट यो कार्य गर्नेछौँ ।
खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी तपाईंहरूका माग पूरा भएनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
सार्कमा आएको गत्यावरोधलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट नेपाल विचलित भएको हो ?
हालै भारतले पाकिस्तानसँगको युद्धमा गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्दा विमल तामाङको ज्यान गयो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
सेना र प्रहरीको सूचनाअनुसार तपाईंको पार्टीले युद्धको तयारी गर्दैछ र मुख्य सुरक्षा चुनौती पनि तपाईंहरू नै हो भन्ने छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हो, हामीले सञ्चारमाध्यमबाट यो जानकारी पायौँ । केही हितचिन्तक मित्रहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको छ । हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ, हामीले युद्ध गर्न चाहेको होइन । हामीले देशको दलाल सत्ता, भ्रष्ट नेता, नोकरशाह, दलाल पुँजीपतिहरूलाई हटाउन र त्यसको ठाउँमा जनताको सत्ता बनाउन, देशभक्त नागरिकहरू, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू, राष्ट्रसेवकहरू र श्रमिक वर्गलाई जिताउन खोजेको हो । यो गर्नु कसरी अति हुन्छ ? कसरी सुरक्षा चुनौती हुन्छ ? सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ । नेपाली सेना र प्रहरी भ्रममा पर्नु हँुदैन । युद्ध चाहन्छन् भने अर्बौं रुपैयाँका घातक हतियार खरिद्ने दलाल सत्तासीन वर्गले चाहेका छन् । चुनौती छ भने त दलालहरूले देशलाई सिक्किम बनाउने लेन्डुपे चुनौती छ । हाम्रो भनाइ छ सबै देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी सबै मिलेर स्वाधीन र आत्मनिर्भर नेपाल बनाऔँ । यसमा सेना र प्रहरीले पनि साथ दिऊन् । – रातो खबर साप्ताहिकबाट
Copyright © 2016 Janakhabar. All Rights Reserved